बालकलाई कसरी बुद्धिमान् बनाउने ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
बालकलाई कसरी बुद्धिमान् बनाउने ?
बालबालिका उम्रिसकेका बिरुवा हुन् । उम्रिसकेका बिरुवालाई राम्रो असल फल लाग्ने बनाउन केके आवश्यकता पर्दछ । पहिला त असल राम्रो बिरुवा फस्टाउन तिनलाई राम्रो योग्य असल माटो नै चाहिन्छ । राम्रो असल माटो परेन भने त्यो बिरुवा उम्रिएर पनि त्यसै कित्रिक्क परेर बढ्नै सक्दैन । त्यसको फल लाग्नु त कता हो कता त्यसै ठिमुरिएर मर्छ । यो सबै हामीले देखेका छौं ।
बिरुवालाई राम्रो असल माटो चाहिएजस्तै बालबालिकालाई असल राम्रो परिवार या पाठशाला चाहिन्छ । राम्रो असल परिवार अथवा पाठशाला भएन भने जतिसुकै बुद्धिमान् बालक भए पनि बुद्धिअनुसार ज्ञान नपाएर बालक राम्रो हुने कुरै आउँदैन । त्यो बिरुवा माटोमा कक्य्राक्क परेजस्तै बालकको पनि त्यही हालत हुन्छ ।
अपवादका रूपमा लाखौंमा एकदुईमा बिरुवा र बालबालिका राम्रो निस्किन्छन् । जतिसुकै रूखो माटो भए पनि त्यहाँ उम्रिएर ठूलो रूख भएर फल दिन समर्थ भएका हुन्छन् भने जतिसुकै असक्षम परिवार र पाठशाला भए पनि त्यहाँबाट राम्रो शिक्षा पाएर असल नागरिक वा महान् व्यक्तित्व बन्न सफल भएका पाउँछौं । तर, त्यो लाखौंमा एउटादुईटा मात्रै हुन्छन् ।
कुन कुरा राम्रो गर्न हुने हो र कुन कुरा नराम्रो गर्न नहुने हो भनेर परिवार र पाठशाला सबलेै कुरा बुझेको हुनुपर्छ । सबै कुरा बुझेका भए मात्रै तिनले बालकलाई राम्रो असल शिक्षा दिन सक्छन् र बालक असल राम्रो बन्न सक्छ । त्यसलाई ज्ञान कसरी दिने कस्तो विधि अपनाएर ज्ञान दिए त्यसले ज्ञानआर्जन गर्न सक्ला । सबै जानेबुझेका शिक्षक, अभिभावक भए भने मात्रै बालबालिका चरित्रवान् र बुझक्कड हुन सक्छन् । असल राम्रो माटो पाएर बिरुवाको जरा राम्रोसँग फैलिई ठूलो बोट भएर त्यसले राम्रो मीठो फल दिएजस्तै असल अभिभावक र पाठशालाले राम्रो असल ज्ञान दिए भने त्यो बालक महान् व्यक्तित्व बन्न सक्दछ । पाठशाला अभिभावक दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
बालक कतिसम्म बुझ्न सक्ने क्षमतावान् छ त्यसमा पनि सबै भर पर्दछ । मानिसले जन्मिदै स्वभाव लिएर आएको हुन्छ । जस्तै पानी हेर्नुस् त, त्यसलाई जतिसुकै तताउनुस् एकछिन तातो हुन्छ र एकछिनपछि चिसै हुन्छ । ताताको तातै राख्न सकिन्न त्यो उसको स्वभाव हो ।त्यसकारण शिक्षक अभिभावक त्यसको ज्ञानलाई बुझेर ज्ञान दिन सक्ने भए भने त्यो बालक उत्तम बन्न सक्छ । घन छोटेर बञ्चरो त बनाउन सकिन्छ । सिपालुले शिक्षा दिएको मान्छे सिपालु नै हुन्छ ।
बालबच्चालाई केही समय खेल्न दिनैपर्छ । त्यसले गर्दा उसलाई तन्दुरूस्ती बनाउँछ । मेहनत गर्ने मानिस त्यति बिरामी परेको छैन । रातदिन काम गरेको हुँदा भरियाहरूलाई कहिल्यै बिमार लाग्दैन ।
अर्को खेलले गर्दा तिनलाई नयाँनयाँ विचार आउँछ । साथीहरूमा विचारविमर्श हुन्छन् । त्यसले गर्दा उसलाई नयाँ विचार उत्पन्न हुन्छ । बेलाबेलामा अभिभावकले तिनको विचार भने गरिराख्नुपर्दछ । बालबालिकाहरू कहाँ के गर्दै छन् । नराम्रो काम गर्न लागेको देखियो भने तिनलाई पिटपाट गर्नुभन्दा नराम्रो काम गर्दा कुन पात्रले कति दुःख पाइरहेको छ, त्यस्तो पात्रलाई देखाइदिने हो भने त्यसले आफैं महसुस गर्छु र नराम्रो काम गर्न छोड्दछ ।
बेलाबेलामा राम्रो मलपानी दिनुपर्छ
बेलाबेलामा राम्रो पानी दिँदा बिरुवा राम्रोसँग हुर्किएर त्यसले राम्रो मीठो फल दिएजस्तै अभिभावक शिक्षकले बालबालिकालाई गुणकारी शिक्षा दिँदा जसको प्रेरणाले तिनीहरू ठूल्ठूला कार्यहरू गरेर देखाउन सक्ने होऊन् । महान् वैज्ञानिक र कविका जीवनी ल्याएर पढाइलेखाइदिने गरे ठूलो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् ।
राम्रो स्वच्छ हावा र खुला आकाश चाहिन्छ
बिरुवालाई स्वच्छ हावा र खुला आकाश नभैकन बिरुवा राम्रो हुनै सक्दैन । हावा भएन भने हाम्रा रूखबिरुवाहरू सबै बाफिएर मर्न जान्छन् । बढी भयो भने पनि हावाले सबै रूखबिरुवाहरू भाँचेर फालिदिन्छन् । त्यसकारण ठीक्क मात्रामा भए मात्रै हाम्रा रूखविरुवाहरू फस्टाउँछन् ।
बालबालिकालाई पनि असल राम्रो साथी चाहिन्छ । खराब साथीको संगले जीवन बरबाद हुन जान्छ । राम्रो असल साथीले दुखको बेला साथ दिन्छ, नजानेका कुरा सिकाइदिन्छ र सुखदुखमा सधैं साथ दिन्छ । दुष्ट साथीले दुख मात्रै दिने गर्छ । त्यसकारणले भविष्य उज्ज्वल बनाउने साथीसँग संगत गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
बिरुवा आफैं बढ्छ
यति गरेपछि बिरुवा आफैं बढ्छ र ठूलो भएर त्यसले हामीलाई मीठो फल दिन्छ र हामीले खान पाउँछौं । हाम्रा बालबालिकाहरू सानामा प्रायः सबै चकचके हुन्छन्– यता पनि दौडिन्छन् उता पनि दैडिन्छन् । हामीले गर्न नदिएर मात्रै हो उनीहरू जे काम पनि गर्न सक्छु जस्तै गरेर गर्न खोज्दछन् । अभिभावक र शिक्षकले त्यो देखे भने ए के गरेको बिग्रिन्छ भनेर हप्काउँछन् र उसले त्यो काम छोडेर भाग्छ । त्यसलाई नहप्काई त्यसरी होइन् त्यो काम यसरी गर्ने हो भनेर सिकाइदिने हो भने उसले त्यो काम तुरुन्तै जान्दछ र त्यो काम उसले कहिल्यै बिर्सिदैन पनि । तिनीहरूसँग अद्भूत शक्ति हुन्छ । पाँच वर्षको बालकले गाडी चलाएको भनेर विभिन्न ठाउँमा देखाएको हामीले देखेका छौं । यस्ता बालबालिकालाई राम्रो बुद्धिमानी बनाउने अभिभावक शिक्षकको ठूलो हात हुन्छ ।
प्रकाशित: १० असार २०७७ १५:३४ बुधबार
जूनकीरी बुद्धिमान् बनाउने